Fanoherana · Febroary, 2021 · Global Voices teny Malagasy
Fanoherana · Febroary, 2021
Tantara mikasika ny Fanoherana tamin'ny Febroary, 2021
Afrika Mainty 20 Febroary 2021
Amin'izao tsingerintaona faharoa ny revolisiona ao Sodàna izao, nihaika ny tahotra coronavirus ny olompirenena ary mitaky fiovana haingana avy amin'ny governemanta tetezamita.
Azia Atsinanana 19 Febroary 2021
Takian'ny torolalana, navoaka tamin'ny 5 febroary ny mpampianatra amin'ny ambaratonga rehetra hampianatra ireo fandikan-dalàna mivoitra amin'ny lalànan'ny fiarovam-pirenena ao Hong Kong.
Mpanakanto nomerika mampiseho ny fiainan'ireo Thailandey sy tolona ho amin'ny demaokrasia
Azia Atsinanana 17 Febroary 2021
"Fotoana izao ijoroantsika hijoroan'ny hoavy tsaratsara kokoa tsy ho antsika ihany fa ho an'ny taranaka manaraka ihany koa.”
Karaiba 15 Febroary 2021
Azia Atsinanana 10 Febroary 2021
"Midika hoe siny vy ny hoe Than Pone. Midika hoe mampaneno vilany ny hoe Than Pone Tee. Amin'ny fomban-drazanay, midika hoe fandroahana fanahy ratsy ny fampanenoana siny vy."
Azia Atsimo 02 Febroary 2021
Natombok'i Hong Kong ny tsy maintsy hiraketana ny tena anaran'ireo mpampiasa karatra SIM amin'ny finday
Azia Atsinanana 01 Febroary 2021
Raha ankatoavina izy io, tsy maintsy ataon'ireo orinasa mpanome tolotra finday ny fametrahana angondrakitra iray misy ny torohay mahakasika ireo mpanjifany. Voatery ihany koa izy ireo hitahiry ireo rakitra mandritra ny taona iray raha kely indrindra aorian'ny tsy fampiasàna intsony ilay karatra SIM.